सामलिङ्ग पावरको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत, कतिमा होला पहिलो कारोबार ?
बुधवार सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ ।
कम्पनीको ५० लाख कित्ता आईपीओ सूचीकृत भएको छ । कम्पनीको सिम्बोल एसपिसी रहेको छ । मंसिर ८ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र कम्पनी बीच धितोपत्र सूचीकरण सम्झौता सम्पन्न भएसँगै बिहीवारबाट कारोबारमा आउन लागेको हो ।
कम्पनीको शेयर बिहीवारदेखि दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउनेछ । नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि मूल्यरेञ्ज रू. ९८ दशलमव ७७ देखि २९५ दशमलव ३१ तोकेको छ ।